Igumbi lokulala elinye kwi-Bigfork Village - I-Airbnb
Igumbi lokulala elinye kwi-Bigfork Village
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguRebekah
Inomtsalane igumbi elinye lokulala kwilali yaseBigfork yembali. Intsha kwimarike ngepeyinti entsha, ikhaphethi, kunye nefenitshala kuyo yonke indawo. Yonwabela izandi zoMlambo iSwan ukusuka kumngangatho. Hamba uye kwiindawo zokutyela, iivenkile, indawo yemidlalo yeqonga, indlela yendalo, idokhi kawonke-wonke nokunye. Iwasha / isomisi ziyafumaneka ukuze kube lula kuwe kunye nayo nayiphi na enye into onokuthi uyifune.
Siyakumema ukuba ukonwabele le condo icocekile kwaye ikhululekile entliziyweni yeBigfork. Yonwabela ilanga lasekuseni kunye nesandi soMlambo i-Swan kwidesika okanye upholile kwigumbi lokulala kunye
jonga isibhakabhaka ebusuku ngokukhanya kwesibhakabhaka ngaphezulu. Nokuba siyintoni na isizathu sotyelelo lwakho, le ndawo isembindini ikwi-condo ilungile kwikhaya lakho kude nekhaya. Nceda uzive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo. Sifuna ukuba uzive ngathi lundwendwe lwethu kwaye ube namava amangalisayo eBigfork.
Ishawa (akukho bhafu)
I-Smart TV (zisa iipassword zakho zokusasaza ozithandayo)
Izambatho kunye nesinxibo
Ifriji / isitovu / iMicrowave / iDishwasher
Indawo yokupaka imoto engaphantsi kweenyawo ezili-15
Umnyango usuka kwi-alley
Le yunithi ayikhuselwanga ngabantwana
Ilali eyimbali yeBigfork yasekwa ngo-1901 kunxweme loMlambo iSwan kunye neLake laseFlathead. IBigfork yaziwa ngendawo yayo yeqonga, iigalari, iindawo zokutyela, kunye nemisebenzi engapheliyo yolonwabo.
Siya kubuhlonipha ubumfihlo bakho ngexesha lokuhlala kwakho kwaye senze nantoni na esinokuyenza ukuqinisekisa ukuba unamava amnandi eBigfork. Izalathiso kwi-condo kunye neekhowudi zakho zokutshixa ezizodwa ziya kubonelelwa kuwe ngaphambi kokuba ungene. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo wamkelekile ukuba umnxeba okanye isicatshulwa.
Siya kubuhlonipha ubumfihlo bakho ngexesha lokuhlala kwakho kwaye senze nantoni na esinokuyenza ukuqinisekisa ukuba unamava amnandi eBigfork. Izalathiso kwi-condo kunye neekhowudi…